Madaxweyne Gaas oo Dib ugu soo Laabtay Garowe – Radio Daljir
Oktoobar 25, 2015 2:45 b 0
Axad, Oktoobar 25, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 25-10-2015 siweyn loogu soo dhaweeyey magaalada Garoowe ee caasimadda Dawladda Puntland , oo muddo ku dhow saddex bilood uu uga maqnaa safar shaqo oo uu ku joogay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug.
Banaanka hore ee magaalada ayaa madaxweynaha iyo wefdigiisa waxaa si Habsami leh ugu soo dhaweeyey Gudoomiyaha Baarlamaanka Dawladda Puntland Siciid Xassan Shire, Wasiiro, Xildhibaano, Waxgarad, Haween, Dhalinyaro iyo masuuliyiin kale duwan oo diyaar garow xoogan ugu jiray soo dhaweynta Madaxweynaha.
Shacabkii ka qeyb-qaadanayey soo dhaweynta Madaxweynaha ayaa watay boorar lagu dhajiyey sawirka Madaxweynaha , Calanka Puntland , Caleemo qoyan iyo hal ku dhigyo kala duwan oo ay ku bogaadinayeen howsha horumarineed ee uu Gobalka Mudug u joogay Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa guud ahaan Madaxdii iyo shacabkii soo dhaweeyey u mahadceliyey , waxaana uu ku bogaadiyey dadaalka ay ugu jiraan ka qeyb-qaadashada horumarka baaxadda leh ee ka soconaya Puntland.
Soo laabashada Madaxweynaha ee magaalada Garoowe ee caasimadda Dawladda Puntland ayaa salka ku haysa sidii uu u furi lahaa kalfadhiga 36-aad ee Baarlamaanka Dawladda Puntland oo maanta si rasmi ah u furmaya.
Puntland iyo wasaaradda Arimaba Dibadda Finland oo Heshiis wada Gaaray